Afo Nandravarava Tany Amin’ny Morontsiraka Atsinanan’i Korea Atsimo
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Chichewa Danoà Espaniola Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iban Indonezianina Iokrenianina Italianina Kantôney Nentim-paharazana Kirghiz Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tiorka Tseky Vietnamianina Yorobà
Tranon’ny fianakaviana Vavolombelon’i Jehovah, kilan’ny afo tanteraka
25 APRILY 2019
Nisy ala may tany amin’ny morontsirak’i Korea Atsimo, tany amin’ny faritr’i Gangwon, tamin’ny 4 Aprily 2019. Niely haingana be ilay afo ka nilaza ny fanjakana fa misy loza mihatra amin’ilay firenena. Rehefa voafehy ilay afo, dia velaran-tany 1 600 hektara mahery no efa may, ary olona roa no maty.
Milaza ny sampana fa tsy nisy rahalahy na anabavy maty. Trano valo kosa no simba, ary nisy vokany teo amin’ny rahalahy sy anabavy 27 izany. Manaraka ny toromariky ny sampana ny Komitin’ny Vonjy Rano Vaky sy ny mpiandraikitra ny faritra, ka miara-miasa amin’ny anti-panahy mba hampaherezana sy hanampiana an’izay tratran’iny loza iny.
Matoky isika hoe “fialofana sy hery” ho an’ny mpiara-manompo amintsika i Jehovah, sady “mpanampy mora azo amin’ny fotoam-pahoriana.”—Salamo 46:1.
Trano Maro no Kilan’ny Afo any Philippines